Fadeexad la yaab leh oo ku soo baxday guddiga Doorashooyinka dadban ee maamulka Juballand!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Fadeexad la yaab leh oo ku soo baxday guddiga Doorashooyinka dadban ee maamulka Juballand!!
Fadeexad la yaab leh oo ku soo baxday guddiga Doorashooyinka dadban ee maamulka Juballand!!
Xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer gobol ee maamulka Jubbaland ayaa waxaa lagu helay fadeexad weyn oo ka baxsan waajibaadkii loo xilsaaray taasoo ka dhalatay kursi lagu loolamayey.
Guddoomiyaha Guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Jubbaland Cabdi Cali Raagge oo taageeraya Musharax gaar ah ayaa si cad isbedel ugu sameeyey ergooyinkii wax dooranayey qaarkood.
Ciidamada amaanka maamulka Jubbaland ayaa la sheegay iney is hortaag ku sameeyeen doorashadaas la musuq maasuqay ka dib markii dacwad arintaas ku saabsan uu u gudbiyey Nabadoonka Beesha Gaaljecel Imaam Macalin oo diidanaa isbedelka lagu sameeyey ergooyinkii uu gudbiyey.
Muran iyo isqabqabsi xoogan oo ka dhashay arintaas ayaa sababay in dib loo loo dhigo doorashadan kursigan illaa amar dambe si xal looga gaaro muranka taagan.
Fara gelinta gudoomiyaha guddiga doorashada Juballand ku sameeyey doorashada kursiga beesha Gaaljecel ayaa noqotay fadeexad weyn oo meesha ka saartay kalsoonidii lagu qabay guddigan oo waajibaadkiisa aysan ku jirin iney galaangal ku yeeshaan doorashooyinka, isla markaana taageeraan musharax gaar ah. waajibaadkoodana waxaa ka mid ah iney si dhexdhexaadnimo ah ula shaqeeyaan beelaha iyo murashaxiinta tartamaya.
Maamulka Juballand ayaa dhameystiray inta badan xildhibaanadii aqalka hoose, marka laga reebo dhowr xildhibaan oo muran iyo isqabqabsi uu ka taagan yahay.
Previous PostBoqolaal Dadweyna ah oo saaka isugu soo baxay Salaad Roobdoon ah magaalada Jowhar "Sawirro"! Next PostGuddoomiyaha Doorashooyinka iyo Taliyeyaasha Nabadsugida oo gaaray Hoolka Doorashada Jowhar "Sawirro"!